ဗီယက်နမ်လား….အနောက်နိုင်ငံလား…???? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » ဗီယက်နမ်လား….အနောက်နိုင်ငံလား…????	7
Posted by သျှားသက်မာန် on Nov 29, 2016 in Travel |7comments
ဒီတစ်ခေါက်မွန်လေးရောက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကတော့ ၂၀၁၆ မှာhot ဖြစ်နေတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံပါ။ သွားလည်တဲ့မြို့ တွေကတော့ ဒါနန်း၊ ဟွေ့ အန်းနဲ့ မြို့ တော်ဖြစ်တဲ့ဟိုချီမင်းပါ။ဒါနန်းကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိပြီး ဟွေ့ အန်းကတော့ ဒါနန်းကနေ နောက်ထပ်(၁)နာရီလောက်ကားနဲ့ ဆက်သွားရင်ရောက်တဲ့နေရာလေးပါ။
ရန်ကုန်ကနေဒါနန်းကိုတိုက်ရိုက်လေယာဉ်တော့မရှိပါဘူး။ဟိုချီမင်း(စိုင်ဂုန်)ကနေtransit နဲ့ ဒါနန်းလေဆိပ်ကို
ဆက်စီးရပါတယ်။ဘတ်ဂျက်လိုင်းဖြစ်တဲ့ Viet Jet နဲ့ ဟိုချီမင်း(စိုင်ဂုန်)မှာတစ်ထောက်နားပြီးဒါနန်းကိုလေယာဉ်
ဆက်စီးကြတာပါ။Vietnam Airline လည်းရောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ Vietnam Airline စီး
ကြည့်ပါမယ်။Viet Jet ကရန်ကုန်ကနေစထွက်ကတည်းကနေ့ လည်(၁)နာရီအချိန်ပဲရှိတာမို့ လို့ ဒါနန်းလေဆိပ်
လေဆိပ်ကနေဟိုတယ်ကိုမိနစ်(၂၀)လောက်သွားရတာမို့ ရောက်တဲ့နေ့ မှာလည်ဖို့ အချိန်မရှိတော့ပဲဟိုတယ်မှာ
ပဲညအိပ်လိုက်ပါတယ်။ ညစာကိုဟိုတယ်ကညွှန်ပေးတဲ့စားသောက်ဆိုင်မှာဝင်စားလိုက်ပါတယ်။သူတို့ မှာMenu
ကအစ ဗီယက်နမ်၊တရုတ်၊ကိုရီးယား(ကိုရီးယားလူမျုိူးတွေလာတာများလို့ )စာတွေပဲပါတာများပါတယ်။အင်္ဂလိပ်
စာလည်းကောင်းကောင်းမတတ်တော့Body Langudage ကိုပဲအားကိုးရတာပေ့ါ။
ဒါနန်းမှာပိုက်ဆံလဲဖို့ နေရာသိပ်များများစားစားမတွေ့ ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ရင်လေဆိပ်မှာလဲများများ
စားစားလဲသွားစေချင်ပါတယ်။(ဗီယက်နမ်မှာဒေါင်မရှိရင်ဒေါ်လာနဲ့ လည်းစားလို့ ၊၀ယ်လို့ မရတဲ့နေရာတွေ
ရှိတတ်လို့ ပါ။)သူတို့ နိုင်ငံကငွေကြေးဖောင်းပွမှုထဲမှာတစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တော့ကိုယ်တွေဆိုတာချက်ချင်း
ကိုဒေါ်လာလဲလိုက်တာနဲ့ သန်းကျော်ဘီလီယံနာတွေဖြစ်ပါလေရော။ :P
မွန်လေးတို့ ဟိုတယ်က My Khe ကမ်းခြေနဲ့ နီးတော့အိပ်ရာကစောစောထပြီး ကမ်းခြေကိုလမ်းလျှောက်သွား
တာပေါ့။မွန်လေးတို့ ရောက်တဲ့နေ့ ကမုန်တိုင်းနည်းနည်းရှိလို့ မိုးလေးတွေဖွဲဖွဲကျနေပါတယ်။မိုးကာအကျီလည်း
ပါတယ်။ သိပ်လှတဲ့ကမ်းခြေကဖူးခပ်လိုတောင်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတာပါ။ကမ်းခြေကနေ Son Tra Peninsula (ကွမ်ရင်မယ်တော်)ကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။
Banana hill ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီး ငါတို့ တောင်လို့ လည်းအဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ဒီတောင်ကတော့ ဒါနန်းမြို့ 
မှာလည်စရာအသက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါနန်းကနေ (၁)နာရီလောက်သွားရတာဖြစ်ပြီး ၁ရက်တည်းမှာပဲ Morning ဆို Spring၊ Noon ဆို summer၊ Afternoon ဆို Autumn နဲ့Evening ဆို winter လို့ ခေါ်တဲ့ ရာသီဥတု(၄)မျိုးရှိ
တဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်တယ်။ဒီတောင်ကိုတက်ဖို့ အရင်ဦးဆုံးမြင်ရတဲ့မုခ်ဦးကတော့တရုတ်လက်ရာနဲ့ ဖန်တီး
ထားတဲ့အဆောက်အအုံပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ ကတော့အဲ့အဆောက်အအုံရဲ့ ညာဘက်မှာဝင်ဝယ်လိုက်
ရုံပါပဲ။ ၀င်ကြေးကတော့ဒေါင် ၆၀၀,၀၀၀ပါ (မြန်မာငွေနဲ့ ဆို၃သောင်းနဲနဲစွန်းစွန်းပေါ့)။ စက်လှေကားနဲ့ တစ်ခါ
တက်၊ပြီးပြန်ထွက်၊ တောင်ခြေကိုရောက်ဖို့ လမ်းဆက်လျှောက်နဲ့ တကယ့်cable car စီးတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ 
(၁၅)မိနစ်လောက်တန်းစီစောင့်ရပါတယ်။တကယ်cable car လည်းစီးရောcable car ကရပ်နေတာမျိုးမဟုတ်
ဆုံးပဲစီးရတာဆိုတော့ကိုယ့်လူတွေပါတဲ့cable car ရမှစီးတာအကောင်းဆုံးပါ။လူပြည့်မှထွက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့
အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်လူအုပ်စုနဲ့ မဆန့် ရင်နောက်cable car ကိုပြောင်းစီးလို့ ရပါတယ်။အဲ့cable car နဲ့ တောင်
ထိပ်ကိုရောက်ဖို့ နာရီဝက်စီးရပါတယ်။cable car ထဲမှာလည်းမပျင်းရအောင်တီးလုံးလေးတွေဖွင့်ပေးထားလို့ 
မျက်လုံးလေးမှေးရင်းလိုက်သွားရုံပါပဲ။Cable car ပေါ်ကမြင်ကွင်းကလည်းဘာလှသလဲမမေးနဲ့ ။ဘေးကတောင်
တွေ၊ရေတံခွန်တွေပါမြင်နေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မိုးလေးတွေဖွဲဖွဲလေးကျနေလို့ cable car မှန်ကရေငွေ့ တွေလာ
တကယ့်ကိုတောနက်ကြီးထဲcable car ကားစီးရသလိုမျိုးပါပဲ။တောင်ပေါ်ရောက်တော့ တချို့ အန်တဲ့သူကအန်၊
ခဏအပန်းဖြေတဲ့သူကဖြေနဲ့ ပေ့ါ။ကိုယ်တွေကတော့နားကလေထွက်တာကလွဲလို့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။တောင်
ပေါ်မှာလမ်းညွှန်စာတွေကအစပြင်သစ်စာတွေနဲ့ မို့ ပြင်သစ်ကိုလိုနီတွေအုပ်ချုပ်ခဲ့မှန်းကောင်းကောင်းကြီးသိသာ
ပါတယ်။ပြင်သစ်စာနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့ကိုယ်ကတော့သူတို့ ဘာဆိုင်းဘုတ်ပဲတင်တင်အကုန်ကိုဖတ်တတ်၊နား
#Le Jardin d’amour (အချစ်ပန်းခြံကြီး)
အဲ့ပန်းရောင်စုံဖူးပွင့်နေတဲ့ပန်းခြံကိုရောက်ဖို့ ကောင်တာမှာလက်မှတ်ကို ဒေါင် ၇၀,၀၀၀ နဲ့ ထပ်ဝယ်ရပါတယ်။
ပြီးတော့Fanicular လို့ ခေါ်တဲ့ အ၀ါရောင်trainကို(၃)မိနစ်စီးရပါတယ်။Fanicular စီးရင်တော့အပြင်ဘက်ဝရန်
တာမျိုးမှာစီးစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။Gare de Jardin (ပန်းခြံဘူတာ
ရုံ) ကိုရောက်တော့ရပ်ပေးပြီးရထားပေါ်ကနေဆင်းတော့ Le Jardin လို့ ရေးထားတာကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။အဲ့ထဲ
၀င်ပြီး ပန်းဥယာဉ်ကြီးထဲမှာလှချင်တိုင်းလှ၊ပွင့်ချင်တိုင်းပွင့်နေတဲ့ပန်းတွေနဲ့ ကိုယ်တို့ ဓါတ်ပုံတွေမနားတမ်းရိုက်
French Village ကိုသွားဖို့ ပထမကစီးလာတဲ့Fanicular အဆင်းရထားကိုပြန်စီးပြီး Fantasy Park,
Restaurant & bar လို့ ရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြတ်ဝင်ရပါတယ်။ အဲ့သွားလမ်းကိုလည်းအနီရောင်ကောဇော
ကြီးခင်းထားတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကို red carpet ကြီးပေါ်ရောက်နေသလိုလိုပေ့ါ။ ပြီးတော့အ၀ါရောင် cable car
တော့တယ်။အရမ်းကိုလှပြီး ကိုယ်ဆိုတာပျော်လို့ ၊ မိုးဖွဲဖွဲရွာလည်းဂရုကိုစိုက်မနေတော့ဘဲ ပြေးလွှားပြီးဓါတ်ပုံ
တွေရိုက်နေတော့တာပါပဲ။ ဗီဇာမလိုဘဲအနောက်နိုင်ငံရောက်သွားတာလေ တန်မှတန်။သိပ်လှတဲ့ရေပန်းတွေ
ရယ်၊ သိပ်ခန့် ညားတဲ့church ကျောင်းကြီးရယ်၊ Romantic ဆန်တဲ့ဆိုင်လေးတွေရယ်၊ ရှေးကျပြီးအနောက်
လည်းတည်းလို့ရတဲ့Ba Na Hill Mountain Resort လည်းရှိသေးတော့တည်းဖို့ လုပ်ပါသေးတယ်။
Fully booked ဖြစ်သွားလို့ တည်းခွင့်မကြုံလိုက်ရပါဘူး။နောက်တစ်ခေါက်သွားခွင့်ကြုံရင်အဲ့မှာတည်းပြီးစုံအောင်
သွားပါဦးမယ်။အဆင်းကြတော့အောက်ကိုတိုက်ရိုက်ဆင်းရတဲ့cable car ကားကိုစီးရတဲ့ Gare de l’indochine လို့ ရေးထားတဲ့အင်ဒိုချိုင်းနား ဘူတာရုံအဆောက်အအုံထဲကိုဝင်ရပါတယ်။French Villageထဲအ၀င်ဘူတာရုံ
နာမည်က Gare Morin ပါ။မမှားစေနဲ့ နော်။
အဲ့Ba Na Hill မှာနေ့ လည်စာစားဖို့ European restaurant တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Morin လို့ နာမည်ရတဲ့စားသောက်ဆိုင်
လေးမှာပဲစားခဲ့ကြပါတယ်။Waitress လေးကservice တော့ကောင်းသား ကိုယ်တွေကိုဘာလူမျိုးလဲအရင်မေးပြီး
အစားအစာကိုrecommend ပေးပါတယ်။မွန်လေးတို့ မြန်မာလူမျိုးနဲ့ ဘာဟင်းလေးဆိုအဆင်ပြေမယ်..ဘာဆို
ကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေပေါ့။သူပြောတာလေးတွေစားကြည့်တော့လည်း ကိုယ်တွေအရသာနဲ့ အံကိုက်သား။
Ba Na hill ကနေ(၁)နာရီသာသာသွားရင်ရောက်တဲ့ရှေးဟောင်းမြို့ လေးပါ။နောက်နာမည်တစ်ခုက
ထွန်းတတ်တဲ့မြို့ လေးပါ။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအေးချမ်းတဲ့မြို့ လေးလို့ ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ဒီမြို့ လေးက
ဗီယက်နမ်၊တရုတ်နဲ့ ဂျပန်စတိုင်ရောယှက်ထားတဲ့နေရာလေးဆိုတော့ တချို့ အိမ်လေးတွေဆိုတာချစ်စရာလေး
တွေ။တရုတ်ကားတွေထဲမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ။ညဘက်ကျတော့ Night market ကိုသွားဖို့ Bach Dang လမ်း
ကိုသွားရပါတယ်။အဲ့Night market က An Hoi Island မှာရှိတာပါ။ ဟွေ့ အင်မြို့ မှာကျွန်းငယ်လေး၂ခုရှိပါတယ်။
Cam Nam Island နဲ့ An Hoi Island ဆိုပြီးရယ်။ ခုအဲ့Night market က An Hoi Island မှာရှိတာပါ။Bach Dang
လမ်းကနေအဲ့ကျွန်းကိုသွားဖို့ မီးပုံးလေးတွေမျှောတဲ့မြစ်လေးကိုတံတားနဲ့ ကူးပြီးမှရောက်ပါတယ်။လမ်းတလျှောက်
မီးပုံးတွေထွန်းတတ်ကြတာပါတဲ့။တကယ်ကိုနေ့ နဲ့ ညနဲ့ ကပြောင်းပြန်ပါ။နေ့ ဘက်ဆိုလမ်းမှာဆိုက်ကယ်တွေနဲ့ ပဲ
စည်နေတဲ့မြို့ လေးကညဘက်လည်းကျရောမီးပုံးလေးတွေထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့လမ်းမှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ 
ပြည့်နေတဲ့နေရာလေးပါ။လမ်းမှာကပြဖျော်ဖြေနေကြတဲ့ရိုးရာကပွဲတွေလည်းရှိပါသေး။မြစ်ထဲမျှောဖို့ ၊လှေစီးဖို့ လိုက်
ခေါ်နေတဲ့သူတွေလည်းများပါသေး။မွန်လေးတို့ ကိုဗီယက်နမ်လိုစကားတွေလိုက်ပြောလိုပြော၊ပြောဆိုမွန်လေးတို့ က
တယ်။အရမ်းလက်ရာပြောင်မြောက်ပြီး ခေတ်မီတဲ့တံတားကြီးကဟန်မြစ်ကိုဖြတ်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒါနန်း
လေဆိပ်ကိုသွားရာလမ်းနဲ့ ဒါနန်းမြို့ ထဲဝင်လမ်းမကြီးကိုပေါက်ပြီးMy Khe ကမ်းခြေကိုရောက်အောင်ဆောက်
ဟိုချီမင်းလို့ လည်းခေါ်၊စိုင်ဂုန်လို့ လည်းခေါ်တဲ့ဒီမြို့ ကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့ တော်ပါ။သူ့ မှာလည်စရာဆို
Museum၊ Notre Dame Cathedralနဲ့ ခန့် ညားထည်ဝါတဲ့ဟိုချီမင်းရုပ်ထုတို့ ရှိပါတယ်။ဟိုချီမင်းရုပ်ထုထားတဲ့
နေရာကရန်ကုန်မှာဆိုမြို့ တော်ခန်းမရှိတဲ့နေရာနဲ့ တော်တော့်ကိုတူပါတယ်။သူတို့ ဆီမှာလွတ်လပ်ရေးကျောက်
တိုင်မရှိတာကလွဲလို့ ပေါ့။ညဘက်သွားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။လေလေးဖြူးပြီး လမ်းလျှောက်သွားရတာပါ။လူတွေနဲ့ 
မြန်မာတွေအကြိုက်ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ Ben Tan Market( ရန်ကုန်ကဗိုလ်ချုပ်ဈေးလိုပါပဲ လူသုံးကုန်ကအစ
စားသောက်ဆိုင်တွေထိရှိပါတယ်)၊ Saigon Square (အ၀တ်အစား၊အိတ်၊ဖိနပ်တွေရပါတယ်)၊ Takashimaya shopping mall (Branded တွေမျိုးစုံရပါတယ်)။ဈေးကတော့ဝယ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင်ထက်ဝက်ကျော်တဲ့ထိ
ဆစ်ပါ။မတန်တဆတင်ထားတတ်ကြလို့ ပါ။သူတို့ ငွေနဲ့ ကိုယ်တွေငွေနဲ့ ပြန်ယှဉ်တော့ရယ်ချင်စရာတွေ။သောင်းတွေ
သူတို့ ငွေကို သုညတစ်လုံးဖြုတ်၊၂နဲ့ စားရင်မြန်မာငွေရပါတယ်လို့ ။
လို့ )သင်္ဘောကြီးစီးရင်းစားရတဲ့အရသာကတော့ဘာနဲ့ မှမလဲနိုင်ပါ။သင်္ဘောပေါ်မှာအနောက်တိုင်းသီချင်းတွေရော၊
ဗီယက်နမ်သီချင်းတွေပါညံလို့ ပေါ့။တချို့ ဆိုမွေးနေ့ ပွဲတွေလည်းလုပ်ကြတာတွေ့ ခဲ့ပါသေးတယ်။ခုရန်ကုန်ဗိုလ်
တထောင်မှာလည်းriver cruise dinner လုပ်လို့ ရနေပါပြီ။
လေယာဉ်စီးရတာကြာလို့ လေယာဉ်ပေါ်မှာခေါက်ဆွဲမှာစားခဲ့ရာကနေတော်တော်လေးအနံ့ မွှေးပြီးအရသာရှိလို့ 
အပြန်ရန်ကုန်ထိခေါက်ဆွဲဘူးတွေရှာပြီးဝယ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ သူ့ တို့ အစားအသောက်ကအမွှေးအနံ့ တွေများများ
ပါပြီးပူစီနံနဲ့ အရွက်တော်တော်များများပါတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ဆိုင်တွေမှာခေါက်ဆွဲမှာစားရင်ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲအပြင်
ဘေးမှာပဲပင်ပေါက်၊ဆလပ်ရွက်(အရွက်တမျိုးမျိုး)၊သံပုရာသီးနဲ့ ငရုတ်သီးဆီစိမ်တို့ ပါတတ်ပါတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ customဖြတ်ရင် ဖိနပ်မချွတ်ရပါဘူး။ဗီယက်နမ်မှာဖိနပ်ပါချွတ်ပေးပါရပါတယ်။passport ကိုလည်းအထပ်ထပ်စစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ခက ၁၈၁ (အပြန်ကီလိုပါ)၊ ကားခ၊ဟိုတယ်ခက ၁၃၅၊ အစားအသောက်ရယ်၊၀င်ကြေးရယ်၊၀ယ်တာခြမ်း
တာက ၁၄၅ ဆိုတော့ ဒေါ်လာ ၄၆၁ပဲကျခဲ့ပါတယ်လို့ :P အိုးဟိုးဟိုး အရမ်းမကုန်ခဲ့ဘူးပဲ။
kai says: အောင်မြလေး..
ဂုဏ်ယူပါပေ့… ယူပါပေ့..။ တလလတော့.. ခရီးသွားဆောင်းပါး အနေနဲ့ ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲ ထည့်မယ်နော..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 285
သျှားသက်မာန် says: ဘယ်သတင်းစာလဲသိပါရစေ…..အသိပေးပြီးဘယ်ဆောင်းပါးထည့်မယ်ပြောပြီးမှထည့်စေချင်ပါတယ်
မွန်လေး အတော် ဝ လာသလားလို့။
ဟိုးးးးတစ်ခါ မြေနီကုန်းက အိုက်စ်ဘယ်ရီမှာလား တစ်ခါ ဆုံကြတုန်းက ပိန်ပိန်လေးလိုပဲ
kai says: ဘုရား…
အဲဒီသတင်းစာပါ..။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ပုံနှိပ်သတင်းစာပါခင်ဗျား..။
တလက်စထဲ.. အဲဒီမှာ LA လိပ်စာပါပါတယ်..။ ဖုံးနံပါတ်လဲပါပါတယ်..။
ရောက်ရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်…။ ရွာထဲက ဘယ်သူမဆို.. အတွက်.. တံခါးဖွင့်ထားပါကြောင်း..။ https://issuu.com/myanmargazette
သျှားသက်မာန် says: ဟုတ်ပါတယ်မွန်လေးအတော်လည်းဝလာသလိုလှလာတယ်လို့လည်းပြောပြပါတယ်….ဟီး အလင်းဆက်
သျှားသက်မာန် says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်…travel blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါ။ LA ရောက်ရင်လည်းဖုန်းဆက်
“ဘီလူးကြီး”ogre says: post ဆစ်ခုထဲမှာ ဓါတ်ပုံအများဆုံး တင်နိုင်သူအဖြစ်
မန်းဂေးဇက်မှာ 2016 အတွက်မှတ်တမ်း ၀င်သွားပါတယ်